सबै अदालतमा पुगेर चौधरीले भनेः जाहेरी दिनु मेरो भुल थियो-NepalKanoon.com
सबै अदालतमा पुगेर चौधरीले भनेः जाहेरी दिनु मेरो भुल थियो
आफैले दिएको जाहेरी खण्डन गर्नेलाई उल्टै कारवाही
जव कुनै अपराध हुन्छ वा कसैमाथि अन्याय हुन्छ तव न्याय खोज्न न्यायलय वा प्रहरीकहाँ पुग्नु पर्दछ । अन्याय गर्ने भन्दा सहने ब्यक्ति गलत हुन्छ त्यसैले समयमै उपचार खोज्नु पर्छ साथै हरेक नागरिकले पाउनुपर्छ त्यो मौलिक अधिकार पनि हो । तर हतारमा कुरा नै नबुझि या त पछि के होला भन्ने नै नबुझि र आपसमा कुराकानी नै नगरि शंका कै भरमा प्रहरी समक्ष निबेदन दिई हाल्ने वा अदालत समक्ष पुगि हाल्ने बानीले चाही अर्कै रुप लिन सक्छ ।
त्यसैले यो बिषयमा चाही राम्ररी सोचेर र पछिको परिणाम र कानुनी प्रक्रिया समेतलाई बुझेर निर्णय लिनु पर्दछ । अदालत समक्ष पुगेको मुद्दाको प्रक्रिया र निर्णय आफुले साचे जस्तो र आफ्नै पक्षमा मात्र हुन्छ भन्ने हुदैन । प्रमाणित हुनु पर्ने र कानुन बमोजिम हुने कुरा भावना, संवेदना र ईच्छाइएकै जस्तो हुन्छ भन्ने पनि हुदैन । कहीलेकाही बादी नै पनि सजायका भागिदार बन्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यस्तै भएको छ कन्तनपुर महेन्द्रनगरका सुनिल चौधरीलाई । समयमै सोच्न नसक्दा र शंकाकै भरमा प्रहरी हुदै अदालत सम्म पुगेका सुनिल अन्त्यमा पछुताएनन मात्र उल्टै आफैले अदालतबाट कारवाहीमा परे । घटना हो मिति २०६५।३।२२ कञ्चनपुर जिल्ला, भिमदत्त न.पा. वडा नं.४ मा भएको भनिएको चोरीको ।
घटना सामान्य छ तर घटना पछिको क्रम चाही निकै जटिल, यो घटना सुनिल चौधरी, महेश चौधरी र राजु डगौराको एउटै ओछ्यानको आनन्दको निद्राबाट सुरु भई सर्बोच्च अदालत काठमाण्डौ सम्म पुगेको छ तर खाई न पाई छालाको टोपि लाई भने जस्तै ।
राम्ररी सोचेर र पछिको परिणाम र कानुनी प्रक्रिया समेतलाई बुझेर निर्णय लिनु पर्दछ । अदालत समक्ष पुगेको मुद्दाको प्रक्रिया र निर्णय आफुले साचे जस्तो र आफ्नै पक्षमा मात्र हुन्छ भन्ने हुदैन । प्रमाणित हुनु पर्ने र कानुन बमोजिम हुने कुरा भावना, संवेदना र ईच्छाइएकै जस्तो हुन्छ भन्ने पनि हुदैन । कहीलेकाही बादी नै पनि सजायका भागिदार बन्नुपर्ने हुन सक्छ ।
२२ गतेको राति सुनिलको घरमा छिमेककै साथिहरु महेश चौधरी र राजु डगौरा संगै सुनिल चौधरी पनि सुते । यसअघि पनि कहिलेकाहीँ सुत्ने गर्दथे । तर त्यस रात सुनिलले पसलबाट उठेको पैसा पनि घरमा ल्याएका थिए । बिहान उठदा साथिहरु गई सकेका थिए तर उनको बाकस फोडीएको थियो । लत्ता कपडाहरू खेतबारीमा फालिएका थिए । बाकसमा भएको रू.४१०७५ (एकचालीस हजार पचहत्तर) पनि थिएन । उनी आत्तिए र पैसा हराएकोमा हैरान हुदै प्रहरीकोमा पुगे र महेशले आफ्नो घरको, कोठाको र पैसा राखेको बारेमा सबै थाहा पाएकोले राति चोरे भनेर निबेदन दिए । रिसले आफ्नै साथिलाई भेटेनन तर नामै किटेर महेशलार्ई पक्राउ गरी पैसा फिर्ता गरी कारवाही गरी पाउ भन%@    
प्रहरीले आएर घटनास्थल हेर्यो सुनिलले भने जस्तै चोरी भएकै जस्तो अबस्था थियो । सुनिलको घरमा रहेको टिनको बाकसको अगाडितर्फको कुण्डी (लक) टुटी बाकस खाली र खुल्ला अवस्थामा रहेको बाकसको नजिक तरकारी काट्ने छुरा (चक्कु) रहेको, पायन्ट एकवटा र यत्रतत्र छरिएर रहेका क्यासेटका चक्काहरू रहेका थिए ।
त्यसपछि प्रहरीले सुनिलले आरोप लगाएका उनका साथि महेश चौधरीको घरमा खानतलासी गर्यो । महेशको घरको कोठामा रहेको स्टिल दराजको माथिल्लो भागमा रहेको हरियो कभर भएको किताबको बीचमा एक/एक हजारको दुईवटा नोट भेटियो । त्यस्तै अन्तुराम चौधरीको घरको देवाल नजिक काठको बासा (चूली) मा डोराले बाँधी राखेको माटोको करूवाभित्र रू.१००० का नेपाली नोट ३५ वटा, पाँचसय भारूको नोट एक, १०० नेपालीका दुई, २० नेपालीको एक र ५ नेपालीको एक, गरी जम्मा रू.३६०२५। (छत्तीस हजार पच्चीस) नेपाली रूपियाँ प्रहरीले बरामद गर्यो ।
त्यसपछि सुरु भयो कानुन बमोजिमको कायर्यबिधि । बयान सुरु भयो, महेशले पनि आफ्नै घरमा खाना खाई सुनील चौधरीको घरमा सुत्न गएको, सुनील चौधरी खाना खान गएको मौकामा त्यही कोठामा रहेको सानो बाकसहेरेको र सबै निदाएपछि टिनको बाकसलाई बाहिर ल्याई बरण्डामा रहेको चक्कुले चाबी टुटाई बाकसभित्र रहेका पैसा लिई बाकसलाई खेतमा राखी संगै फेरि संगै सुतेको, भोलिपल्ट बिहान उठी पैसा लगि घर गएँको र प्रहरीले भेटाएको ठाँउमा नै आफुले राखेको बताए ।
पायन्ट सबैको कालो रङ्गको थियो । सुत्नुअघि महेशको पायन्ट हो भन्ने थाहा नपाई आफ्नै पायन्ट सम्झी त्यसैमा पैसा राखेँ । पसलमा गई खल्तीमा हेर्दा रकम नदेखी राजुलाई सोधेँ । राजुले मैले लिएको छैन भन्यो । त्यसपछि महेशको घरमा गएँ । महेश घरमा नरहेकोले पैसा लिएर भाग्यो भन्ने शङ्का लागी तुरून्तै जाहेरी दिएँ । प्रतिवादी महेश चौधरीले चोरी गरेको छैन । मेरै गल्तीबाट आफ्नो पायन्ट सम्झी महेशको खल्तीमा राखेको हुँ । मेरो पैसा मिल्दैन कि भन्ने शङ्काले मात्र जाहेरी दिएको हुँ । प्रतिवादी महेश चौधरीले चोरी नगरेको हुनाले सजाय पाउनु पर्ने हैन ।
त्यस पछि अन्य छिमेकीहरु संग पनि साक्षीको रुपमा र अन्य सम्बन्धीत संग पनि प्रहरीले सोधपुछ र अनुसन्धान गर्यो र चोरी भएको र गरेको प्रमाणि भए पछि जिल्ला अदालत कन्चनपुरमा अभियोग पत्र दायर गर्यो । सबै साक्षीहरुले पनि चोरी भएकै बताए ।
तर अदालतमा सबैले कुराहरु फेर्दै गए । चोरीको आरोप लगाईएका महेशले यसरी बताए, “हामी तिन जना संगैसुतेका थियौं । म बीचमा सुतेका थिए । बिहान आफ्नो पायन्ट खोज्दा भेट्याएन । तीनैजानको पायन्ट बाहिर फ्याँकिएको थियो । पैण्टमा हिलो लागेकोले घरमै छोडी खेतमा मिड हाल्न गए । फर्के पछि धुन खोज्दा गोजीमा रू.३८,०००।– भेट्टाएँ । डरले कसैलाई केही नभनी घरको माटोको घैँटामा लुकाई राखेको हुँ । सुनिलको घरबाट मैले चोरी गरेको हैन । जाहेरवाला सुनील चौधरीलाई मसँगको सङ्गत छुटाउन पहिलेदेखि नै निजको परिवारले गाली गरिरहन्थे । चोरीमा फसाएपछि त सङ्गत छुट्ला भन्ने परिपञ्चबाटै झूट्ठा परिपञ्च गरी जाहेरवालाबाटै जाहेर गर्न लगाइएको हो । प्रहरी संग पनि मैले चोरी गरेको हुँ भनी भनेको हैन, लेख्नेले आफैँ लेखी लौ सही गर भने । मैले पढेर सुनाउन भन्दा बढी भएको “थरूवा ” भन्दै कुटपीट गर्न थालेकोले सहन नसकी बाध्य भएर सही गरेको हुँ । हातका नङहरूमा आलपिन ठोकेका थिए । मेरो पायन्टको खल्तीमा भेट्टाएको हुँ । मैले चोरी गरेको होईन ।”
त्यस्तै गरि सुनिलले पनि सूरुको कुरा भन्दा पुरै फरक बयान दिए । उनले भने “रू.४१,०७५।– मैले काम गर्ने पसलबाट लगेर घरमा गएको थिएँ । महेश, राजु र म एउटै कोठामा पायन्ट खोलेर सुतेका थियौं । पायन्ट सबैको कालो रङ्गको थियो । सुत्नुअघि महेशको पायन्ट हो भन्ने थाहा नपाई आफ्नै पायन्ट सम्झी त्यसैमा पैसा राखेँ । पसलमा गई खल्तीमा हेर्दा रकम नदेखी राजुलाई सोधेँ । राजुले मैले लिएको छैन भन्यो । त्यसपछि महेशको घरमा गएँ । महेश घरमा नरहेकोले पैसा लिएर भाग्यो भन्ने शङ्का लागी तुरून्तै जाहेरी दिएँ । प्रतिवादी महेश चौधरीले चोरी गरेको छैन । मेरै गल्तीबाट आफ्नो पायन्ट सम्झी महेशको खल्तीमा राखेको हुँ । मेरो पैसा मिल्दैन कि भन्ने शङ्काले मात्र जाहेरी दिएको हुँ । प्रतिवादी महेश चौधरीले चोरी नगरेको हुनाले सजाय पाउनु पर्ने हैन ।”
पहीले चोरेको साचो हो भन्ने साक्षीहरु पनि अदालतमा यही सही हो भन्दै बयान दिन थाले । साक्षीहरु पल्टुराम चौधरी र बलराम चौधरीले समेत कुरा फेरे । तर अदालतले महेशले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, अनुसन्धानको क्रममा भेटिएका सामान र बरामदी मुचुल्कासमेतबाट अपराध पुष्टि भएको र सुनिलले अदालतमा गरेको बकपत्र अनुसन्धानमा तयार भएका कागज प्रमाणहरूमा आधारित नहुँदा महेश चौधरीले अभियोग दावीअनुसार चोरी गरेको ठहर्छ भन्दै चोरीको बिगो रू.४१०७५।–बमोजिम जरीवाना र एक महिना कैद हुन्छ र रू.३८००।– प्रतिवादी महेश चौधरीबाट जाहेरवालाले भरिपाउने भनी फैसला गर्यो ।
बादी प्रतिबादीहरुको मनस्थिती परिवर्तन भए पनि चोरी भएको हो भनी जिल्ल अदालतले निर्णय गरे पनि सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी महेश चौधरीले पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा पुनरावेदन गरे । तर महेशले चोरी गरेको भन्ने देखिन नआएकोले आरोपित कसुरबाट प्रतिवादी महेश चौधरीले सफाइ पाउने र झूट्ठा बनावटी जाहेरी दिने जाहेरवालालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ अनुसार रू. १०००।– एकहजार जरिवाना हुने भनी फैसला गर्यो ।
फेरी बादी नेपाल सरकारले सुनिलले साथि महेशलाई बचाउन केही रकम पाई सकेपछि मिलीमतो गरी निजलाई सफाइ दिलाउन अदालतसमक्ष प्रतिकूल गरी न्याय निरूपणको विषयलाई जटिल बनाउने दुष्प्रयास गरेको, तथ्यतर्फ कुनै विवेचना नगरी साथै बरामद हुन आएको दसी अपराध सम्बन्ध दसी प्रमाणलाई उपेक्षा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सर्बोच्चमा पुनराबेदन दियो ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष चोरी गरेकोमा साबित गरेको, चोरीको रकमसमेत बरामद भएको, अदालतमा इन्कारी बयान गर्दा मेरो पायन्टमा राखिदिएकोर डरले नभनेको भन्दै रकम लगेर लुकाएर राखेँ भनेको पाइन्छ । तर, ईमान्दारीपूर्वक तत्काल रकम भने दिएको अवस्था छैन । बरू फरकफरक स्थानमा लुकाई राख्दछन् । यसबाट पनि महेश चौधरीको असल नियत देखिँदैन । चोरी अपराध सिङ्गो समाजको विरूद्धको नैतिक पतन हुने अपराध हो । यस्तो अपराधमा जाहेरवालाले जाहेरी दिएको व्यहोराविपरीत बकपत्र गरेको आधारमा निर्दोष भन्ने हो भने सिङ्गो समाजमा नै नकारात्मक असर पर्दछ र चोरी गर्नेले हौसला पाउने अवस्था आउने हुँदा सफाई दिनु नहुने सरकार तर्फका न्यायधिबक्ताको रह्यो ।
तर सर्बोच्चले जाहेरवालाले नै आफ्नो जाहेरीको खण्डन समेत गरेकाले र अन्य प्रमाण पनि चोरी गरेको नै पुष्टि गर्ने खालका नभएकोले सुनिलले झूट्ठा (बनावटी) जाहेरी दिएको मान्नुपर्ने र चोरी जस्तो गम्भीर कसुरमा शङ्का र हतारमा किटानी जाहेरी दिने जाहेरवाला स्वयम् सजायका भागीदार हुनुपर्ने साथै जाहेरवाला वर्ष १८ का कलिलो उमेरको भएकाले झूट्ठा (बनावटी) जाहेरी दिएको कसुरमा रु. १०००।– जरीवाना हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको फैसला ठिक छ भन्ने फैसला गर्यो ।
यो फैसला मिति स् २०७०।९।१८। मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती र माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो ।
नजिरः आफैँले किटानीसाथ चोरी भएको भनी जाहेरी दिने तर आफैँले भूलबश शङ्का मानी जाहेरी दिएको भनी बकपत्र गर्ने र मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिसमेतलाई मौकामा चोरी भएको भनी भन्ने तर पछि भूलबश भनेको भन्नेसमेत देखिएको स्थितिमा जाहेरवालाले झूट्ठा (बनावटी) जाहेरी दिएको मान्नुपर्ने र कसुरमा शङ्का र हतारमा किटानी जाहेरी दिने जाहेरवाला स्वयम् सजायका भागीदार हुनुपर्ने ।
सर्बोच्चको सोमवारको आदेशमा लुकेको अर्को आदेश
Spread the loveसर्बोच्चको स्पस्ट भाषा छ संसदमा नै गतल विधेयक आएको भए पनी त्यसलाई पास गर्न नदिने नसक्ने र रोक्ने अवस्था हुन्छ । वर्तमान संविधान संसोधन उपरको विधेयक संसदको कार्य नै हो, सो कार्य...
नछोपिएको दाग, लाज छोप्न हत्या गर्दा आजिवन मानसिक कैद
Spread the loveहो । त्यो बच्चाको जन्म मैले नै दिएकी हुँ । त्यो अबोध नवजात शिशु मेरो कोखबाट नै जन्मेको हो । त्यो जन्माउन पनि मैले अन्य छोराछोरी सरह एउटा आमाले पाउने सबै दुख...
निर्वाचन तयारी बारे जानकारी गराउन सर्बोच्चको आदेश
Spread the loveकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र, प्रान्त र संघीय तहको निर्वाचनका विषयमा सरकारले गरी रहेको तयारीलगायत अन्य विषयमा जानकारी गराउन आदेश गरेको छ। संविधानले तोकेकै समयमा हुनु पर्ने माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा...
महिला शिक्षकहरुमाथि भेदभाव र अन्याय भएको भन्दै पुनराबेदनमा रिट दायर
Spread the loveकाठमाण्डौ : मा. बि. महिला शिक्षकहरुले आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै पुनराबेदन अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका छन । मा.बि. महिला शिक्षकहरुलाई पनि नि.मा.बि. महिला शिक्षकहरु सरह जिल्ला छान्न पाउने सुबिधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धीत...
Spread the loveकोरियाका शिक्षा मन्त्री किम याङ जिनलाई फाँसी दिइएको छ। दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ जोन हीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा उत्तरकोरियाले शिक्षा मन्त्रीलाई फाँसी दिएको बताए। शिक्षा मन्त्री ही उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम...
अवैध नवजात शिशुको हत्या गर्ने प्रेम जोडीलाई जन्मकैद
Spread the loveपर्वत । अवैध गर्भधारणपछि जन्मेको शिशुको हत्या गरेको अभियोगमा पर्वत जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेका प्रेम जोडीलाई पर्वत जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। पर्वतको नाङ्गलिबाङ्ग–४ की १८ वर्षीया सङ्गीता रेग्मीलाई शिशु हत्यामा सर्वस्वसहित...
कानूनतः नमिल्ने मुद्दा फिर्ता गृहकार्यमा प्रचण्ड सरकार
Spread the loveकैलालीको टीकापुर घटना र जलेश्वरको काण्ड भन्ना साथ हामी सबैमा एक विभत्स अपराधको झभल्को आउछ । अपराधी को भन्ने विषय कानून र अदालती प्रकृयाले अन्तिम टुङ्गो नलगाए सम्म वोल्न मिल्दैन, उक्त घटनामा...
गुफलेडीको गोठमा एकाविहानै देखिएको फरक दृश्य
Spread the loveकसैलाई थाहा थिएन, बस्तुभाउ रहने गोठमा एउटी बेहोस महिला पल्टीरहेकी थिईन । सानी एउटा बालिका आमा उठ भन्दै कराई रहेकी थिईन । ति बालिकाले धेरै उठाउने प्रयास गरिन तर महिला उठिनन ।...
सिंघानिय हत्याकाण्डः अभियुक्तको ईन्कारी बयानले अनुसन्धान कार्य बन्द
Spread the loveकाठमाण्डौ । सिंघानिया हत्याकाण्डका एक अभियुक्त रामविनोद यादव गत मंगलबार धनुषास्थित जिल्ला अदालतमा हाजिर भए । उनले निलम्बित सभासद सञ्जयकुमार साहबाहेक अन्य आरोपीलाई चिन्न इन्कार गरे । उनको यस्तो इन्कारीले सञ्चार उद्यमी...